Ciidamada BADDA Kenya oo dhacdo UGUB ah ka sameeyay Badwaynta Hindiya + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ciidamada BADDA Kenya oo dhacdo UGUB ah ka sameeyay Badwaynta Hindiya +...
Ciidamada BADDA Kenya oo dhacdo UGUB ah ka sameeyay Badwaynta Hindiya + Sawirro
(Mombasa) 22 Okt 2019 – Ciidamada Badda Kenya, ayaa markii ugu horreeysey taariikhda tan iyo xornimadii waxay badda ka sameeyeen dhoolla tus ciidan, kaasoo lagu soo beegay sanad-guurada 10-aad ee Maalinta Geesiyaasha Qaranka.
Ciidamada Badda ayaa ridey 21 madfac oo salaan maamuus ah, iyagoo ag maraya khoorka magaalada Mombasa ee kusii jeeda Badwaynta Hindiya.
Waxaa si KMG ah loo hakiyay dhamaanba howlihii dekedda si loo ogolaado maraakiib iska heer dhexaad ah iyo doomo dheereeya oo ay leeyihiin Ciidamada Badda Kenya oo goobta ku dabbaal degayay, kuwaasoo uu ka mid ahaa markabka Jasiri.
Markabka KN Jasiri, oo uu xukumo Gaashaanle Collins Owino, waxay Kenya heshay 2012-dii wuxuuna ku socon karaa xawaare dhan 28 knots, oo u dhigma 51km/saacaddii dhanka jidka.
Kenya ayaa ku jirta is muujin dhanka badda ah, jeer ay sheeganayso dhul-badeed ka tirsan dhulka Somalia.
Previous articleHal arrin oo BEEN ah oo ay Soomaalida badiyaa ka iibiyeen askartii afgembiga samaysay 1969-kii
Next articleMidowga Yurub oo hakiyay lacagtii uu siinayay Ciidamada Kenya ee Somalia (Nairobi oo walaacsan)